थाहा छ ? पुरुषले यी ३ ‘अंग’ हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिला ! – Tufan Media News
थाहा छ ? पुरुषले यी ३ ‘अंग’ हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिला !
६ पुष २०७७, सोमबार १८:२४
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन, हुन त विज्ञानले केही चमनत्कार गरेर लिं-ग परिवर्तन पनि गरेका छन तर त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अं-ग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग हि-प) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ । महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् ।
आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छा’डेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् ।
पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् । हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छा’डेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।